यसरी गर्नुहोस् हेयर केयर, राती सुत्दा कपाल बाँधेर सुत्नेकी खोलेर त ? – Medianp
यसरी गर्नुहोस् हेयर केयर, राती सुत्दा कपाल बाँधेर सुत्नेकी खोलेर त ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, मङि्सर १८, २०७५१५:०४0
काठमाडौँ,१८ मंसिर । कपाल मानिसको सौन्दर्यको एक पाटो हो । त्यसकारण कपाललाई विशेष हेरचाह गर्न जरुरी रहेको छ । दिन भर त हामी कपालको स्याहर खुबै गर्छौ, नुहाउँछौँ, तेल लगाएर मालिस गर्छौ । कतै हिड्दा धुलोबाट जोगाउनको लागि मसाज गर्छौ । तर रात भर भने हामी कपाललाई खासै केयर गर्दैनौँ । तर विशेष गरेर राती सुत्ने बेलामा कपालको ख्याल गर्नुपर्छ । यदि राती सुत्ने बेलामा कपालको ख्याल गरिएन भने टुक्रिने रुखो हुने झर्ने जस्ता समस्याहरु आउने गर्छन् ।
कपाल टुक्रने डर हुँदैन : राती सुत्ने बेलामा कपाल बाधेर सुत्नाले टुक्रने, डर हुँदैन् । सुतीको तकीयाको प्रयोग गरेर सुत्नाले कपाल सुख्खा हुन्छ । यसबाट बच्नको लागि तकियाको खोल सिल्कको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कपाल स्वस्थ हुन्छ : कपाललाई स्वस्थ राख्नको लागि भिजेको कपाल बाध्न हुँदैन् । कपाललाई सुकाएर हल्का किसिमलो बाध्नुपर्छ । यसो गर्दा कपाल टुक्रने ८० प्रतिशत कम गर्छ ।
कपालमा कर्ल बस्छ : यदि तपाई आफ्नो कपाललाई कर्ली बनाउन चाहनुहुन्छ भने कपाललाई जुरो बनाएर सुत्नुपर्छ । बिहान उठ्दा कपाल कर्ली हुन्छ ।
कपाल बाध्ने तरीका : सिधा कपाल भएको व्यक्तिले हल्का चुल्ठो बनाएर सुत्नुपर्छ जसले गर्दा कपाल लट्टा पर्दैन् । लामो कपाल भएको व्यक्तिले जुरो बनाउनु पर्छ । तर जुरो बनाउँदा कपाल धेरै तन्काउनु हुँदैन् । कपाल घुम्रेको व्यक्तिले कपाललाई पछाडी जुरो बनाएर सुत्नु पर्छ । जसले सुत्न कुनै समस्या गर्दैन् । र बिहान उठ्दा कपालको आकार ठीक अवस्थामा रहन्छ ।
सफल जैविक कृषक बन्य गोविन्द
कारागारबाट छुटाउन पहल गर्छु भन्दै एक बन्दीकी श्रीमतीसँग लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्नुका साथै बलात्कार गर्ने राजपा नेता पक्राउ